Iwo manhamba muChirungu kubva 1 kusvika 1000 - UniProyecta
Papeji rino tichafundisa nzira dzakasiyana kuti tikwanise kudzidza Chirungu zviri nyore uye zvakapusa, ndosaka nhasi tichaenda kunoona manhamba muChirungu: Del 1 kusvika 10, 20, 50, 100, 1000 10000, 1000000, uye XNUMX XNUMX XNUMXTichaonawo maitiro akareruka evana, mavhidhiyo uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvatinotarisira kuti unofarira.
Nezvo iwe unenge uchinyatso kugona kuziva mamwe ese manhamba, zvirinani makadhinari acho. Zvino kune vamwe, vakaita semaasallim, isu tichazokuratidzawo. Neiri gwara rakazara iwe unogona kunatsiridza yako ruzivo uye mataurirwo. Pakupera kwechinyorwa isu tinokusiira iwe yakateedzana mienzaniso.
1 Sei kunyora manhamba muChirungu
1.1 Kubva 1 kusvika ku20
1.2 Kubva 1 kusvika ku100
1.3 Kubva 1 kusvika ku1000
2 Kududzwa kwenhamba muChirungu
3 Nhamba muChirungu yevana
3.1 Chirungu chevana kuburikidza nemavhidhiyo
4 Makore acho muChirungu
4.1 Kubva 1 kusvika ku999
4.2 Kubva 1000 kusvika ku1999
4.3 Kubva 2000 zvichienda mberi
5 Decimals muChirungu
6 Zvidimbu muChirungu
7 Zvikamu muChirungu
8 Mari muchirungu
9 Mienzaniso yemitsara ine nhamba muChirungu
Sei kunyora manhamba muChirungu
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kudzidza kunyora manhamba. Pazasi iwe uchaona matafura akati wandei ane nhamba yega yega muchimiro chayo chakanyorwa muSpanish neChirungu. Iwe unogona kushandisa tafura yezviri mukati kufamba nenzira yechinyorwa uye kushanyira chikamu icho iwe chaunofarira kwazvo kuongorora. Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutisiya isu mhinduro!
Kubva 1 kusvika ku20
Kubva 1 kusvika ku100
makumi maviri nemaviri
makumi maviri nematatu
makumi maviri nemana
makumi maviri neshanu
makumi maviri nenhanhatu
makumi maviri ne nomwe
makumi maviri nesere
makumi maviri anepfumbamwe
Makumi matatu nerimwe
makumi matatu nembiri
Makumi matatu nematatu
makumi matatu nemana
makumi matatu neshanu
makumi matatu nenhanhatu
makumi matatu nemanomwe
makumi matatu nesere
makumi matatu nemapfumbamwe
Makumi mana nerimwe
makumi mana nembiri
makumi mana nematatu
Makumi mana nemana
makumi mana neshanu
Makumi mana nenhanhatu
makumi mana nemanomwe
makumi mana nesere
makumi mana nemapfumbamwe
Makumi mashanu nerimwe
makumi mashanu nembiri
Makumi mashanu nematatu
Makumi mashanu nemana
Makumi mashanu nematanhatu
makumi mashanu nenomwe
makumi mashanu nesere
makumi mashanu nemapfumbamwe
makumi matanhatu nerimwe
Makumi matanhatu nemaviri
Makumi matanhatu nenhatu
makumi matanhatu nemana
Makumi matanhatu neshanu
Makumi matanhatu nematanhatu
makumi matanhatu nenomwe
Makumi matanhatu nemasere
makumi matanhatu nemapfumbamwe
makumi manomwe nerimwe
Makumi manomwe nemaviri
Makumi manomwe nematatu
makumi manomwe nemana
Makumi manomwe nemashanu
Makumi manomwe nematanhatu
makumi manomwe nenomwe
makumi manomwe nesere
Makumi manomwe nemapfumbamwe
makumi masere nerimwe
Makumi masere nemaviri
Makumi masere nematatu
makumi masere neshanu
makumi masere nevatanhatu
makumi masere nemanomwe
makumi masere nemapfumbamwe
Makumi mapfumbamwe nerimwe
Makumi mapfumbamwe nemaviri
makumi mapfumbamwe nematatu
Makumi mapfumbamwe nemashanu
Makumi mapfumbamwe nematanhatu
Makumi mapfumbamwe nemanomwe
makumi mapfumbamwe nesere
makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Kubva 1 kusvika ku1000
Kana iwe uchida kuona yakakura nhamba muChirungu, pazasi takagadzirira tafura muPDF iwe yaunogona kurodha pasi nayo manhamba ese muChirungu kubva 1 kusvika 1000 uye kushandurwa kwayo muchiSpanish. Dzvanya apa kurodha pasi iyo PDF.
Isu tichakudzidzisa iwe makadhinari nhamba mune fomati: nhamba mumadhijiti - nhamba mumavara - madudziro. Ndeapi makadhinari manhamba muChirungu? Ndidzo dzinotitendera ita mashandiro: wedzera, bvisa, gura ... Ngatitangei nemakumi maviri ekutanga makumi. Aya manhamba ndiwo makuru uye iwe unofanirwa kuanzwisisa kwazvo.
Mushure megumi nembiri, manhamba anoteera maitiro mukunyora kwavo: vanopedzisira mukati "Wechidiki". Uye ivo vane fomati (nhamba + teen) nevamwe kunze sa13, 15 na18.
Mushure megumi nematanhatu kunouya imwe pateni: kupera kwenhamba dzakatenderera na "Ty." Semuenzaniso, iyo makumi maviri nhamba muchirungu yakanyorwa makumi maviri. Ivo vanochengeta iwo akafanana apfuura fomati (nhamba + ty), zvakare, ne kusara. Mukati meboka iro munopinda makumi maviri, makumi matatu, makumi mana, makumi mashanu uye makumi masere, sezvakaratidzwa pasi apa.
Kuti unyore mamwe manhamba, iwe uchafanirwa kutevedzera fomati (kutenderera nhamba + nhamba imwe-yedhijitari).
Makumi manomwe faiv
Dzidza nhamba dziri pamusoro zvakanyatsonaka kutora danho rinotevera. Ichave yakafanana pateni, kunyangwe, zviripachena, nemisiyano yayo. Pfungwa huru ndeyekuti iwe uchaita mubatanidzwa uchishandisa izwi iri zana kureva "zana" kana "mazana." Semuyenzaniso:
Kunyora iyo yasara yenhamba iwe uchafanirwa kushandisa iyo mubatanidzwa "na" zvinotevera:
uan han hung
faiv hándred ean makumi mashanu faiv
mazana mapfumbamwe emakumi manomwe ezri
Zvino mamwe ese mayunitsi achauya, ayo anozonyorwa angangoita nenzira imwecheteyo. Zvinonyanya kukosha ndezve Zviuru (
). Tarisa uone nzira yekunyora imwe yeaya manhamba.
iwe zausand zvinomwe zvinobatsira ean makumi mashanu neshanu
Mazana manomwe teenti foar zausand nhanhatu makumi manomwe ean mashanu
Cherekedza kuti mune yekupedzisira muenzaniso isu tinoisa pekutanga «
" zvinorevei mazana manomwe nemakumi maviri nemana muchiSpanish.
Uye shure kwaizvozvo takaisa izwi rekuti “chiuru” kureva chiuru. Mukubatana inosara: «mazana manomwe nemakumi maviri nemana mil». Iye zvino ngatitarisei pamayuniti emamirioni.
uan milion handy zausand
makumi manomwe emamiriyoni matanhatutiusus tuenti zrii
With ichi unogona kutanga nhamba dzekudzidza muChirungu, Zviripachena kuti zvimwe zvinoshaikwa, asi nazvo zvinokwana kuti zvishoma nezvishoma utange kuzvinzwisisa.
Ordinal manhamba, kusiyana neakambo pfuura, akajairwa zvinoreva chinzvimbo chechinhu, semuenzaniso, mumakwikwi. Izvi zviri nyore kudzidza. Chaunofanira kuchengeta mundangariro ndechekuti iwo ekutanga matatu manhamba egumi rimwe nerimwe, kunze kwavo, anoperera mukati st (1), nd (2) uye rd (3) uye vamwe vese mu th.
Kududzwa kwenhamba muChirungu
Nhanho inotevera mukufunda manhamba muChirungu, mushure mekuziva kuti akanyorwa sei, kuziva matauriro kana kuadudza. Takugadzirira tafura iwe uine dzimwe nhamba muChirungu nemadudziro avo. Edza iwe uye iwe uchaona kuti unonzwika sei chaizvo Britain:
Sezvo idzi dzingori nhamba shoma, isu tasanganisira vhidhiyo mune yemuno mutauri anoverenga manhamba nezwi rakaringana. Nezvo iwe uchazadzisa zvinhu zviviri: teerera kune yakasikwa matauriro eEngland uye edza kutevedzera mataurirwo:
Nhamba muChirungu yevana
Hapana mubvunzo kuti kudzidzisa Chirungu kuvana harisi basa ratinga funge sezviri nyore, muchokwadi rakaoma, sezvo mudzidzisi kana murayiridzi achifanira kuziva nzira yekunzwisisa vana kuitira kuti nzira dzavo dzive nemhedzisiro inogutsa. Ndokureva kuti hazvisi zvekungotanga sekunge pane chero kirasi yevechidiki kana vana vakuru, asi zvakare kuti mamwe maitiro anofanirwa kushandiswa nenzira iyo inozokwanisika kutora kutarisisa kwemwana kuvadzidzisa Chirungu.
Nzira yakanakisa yekuti vana vadzidziswe Chirungu kuvaratidza uyu mutauro mutsva muchimiro chemutambo, ndokuti, gara uchitarisa kunakidzwa kwevakomanaNeiyi nzira, hazvinganetsere kuti vateerere, asi zvichave zvinopesana nekuti vachada kutamba zvakanyanya kuti vadzidze iwo manhamba muChirungu. Mwana anofanirwa kunzwa kubatikana mune ino mhepo uye anofanirwa kunzwa kuti zvese zvinomukomberedza zviri muChirungu kuitira kuti anzwe zviri nani.
Saka kuti vana vawane mukana wekudzidza manhamba, rega ndikuudze kuti une mitambo yakawanda, nziyo uye nzira dzakawanda, pachokwadi chakanakira ndechekuti iwe uvadzidzise iwo manhamba kubva 1 kusvika 10 uye sezvavanokura uye zvichienderana nekuti chinja iwe unogona kusarudza kuwedzera huwandu hwe nhamba kuti vana vari kudzidza. Nenzira iyi vana vanogona kudzidza zviri nyore iyo manhamba muChirungu uye zorora uine chokwadi chekuti iwe uchaona mhedzisiro yekudzidza kwavo zvakanyatsojeka.
Iwe unogona kuwana dzakawanda sarudzo dzekudzidzisa vana uye chokwadi chiri chikuru chazvo ibasa remudzidzisi. Pano tinovasiira iwe, ruzhinji rwataigona kuwana:
Chirungu chevana kuburikidza nemavhidhiyo
Hapana mubvunzo kuti vadiki vana, ndipo pazvinonyanya kukosha kutanga kudzidzisa mutauro weChirungu mavari, zvisinei tinogona kuva nechokwadi chekuti zvakanyanya kuoma, sezvo vana vane nguva yakaoma kuchengeta kwavo Mune chimwe chinhu chavari kudzidza, zvirinani kuti vashandise matekinoroji akasarudzika, anozovatendera kuti vafunge uye vafare, nekuti zvikasadaro ndinofunga zvichave zvakaoma kwazvo kuchengetedza kwavo uye kuona kuti vana vanogona kudzidza.
Isu tinonyanya kuda kutarisa pachidzidzo chekuverenga manhamba, nekuti pese paunodzidzisa Chirungu kumwana unofanira kutanga nezvakakosha, ndiko kuti, ne izwi, arufabheti uye nhamba, haugone kutanga kudzidzisa girama kumwana, asi unofanirwa kuzviita nhanho nhanho.
Kune vana, kudzidza kunofanirwa kuitwa nenzira yekudyidzana, uye izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekushandisa mavhidhiyo, nekuti sekuziva kwako. vana vanonyatsoda kuona tv, kunyanya kana ari makatuni. Tinokurudzira kuti iwe utore mavhidhiyo ane makatuni ane nziyo umo nhamba dzinoratidzwa, nenzira iyi mukomana achafunga kuti arikuona chirongwa cheterevhizheni uye iwe uchabva watora pfungwa dzake.
Mifananidzo iyo mavhidhiyo aya anayo, mukuwedzera kududziro nemanzwi, ichaita kuti zvive nyore kuti mwana adzidze Chirungu, hapana mubvunzo kuti tiri kutaura nezveimwe yeakanakisa maitiro ekufunga nezvayo, nekuti iko kushandisa Nhasi, mhando iyi yemavhidhiyo zvinhu zvave kukosha kuti ukwanise kudzidza Chirungu, kunyanya kune vana vadiki.
Makore acho muChirungu
Makore muChirungu akanyorwa uye akataura neimwe nzira. Iko hakuna kuwanda kunetsa, iwe unongofanirwa kupatsanura iyo nhamba muzviverengero. Maitiro ekunyorera makore anosiyanawo zvichienderana nehuremo hwavari, uye zvakare nezvimwe zvisirizvo.
Izvo zvikamu zvitatu zviripo ndeizvi: kubva 1 kusvika 999, kubva 1000 kusvika 1999 uye kubva 2000 kusvika.
Kubva 1 kusvika ku999
Aya makore, ari matatu manhamba, anogona kupatsanurwa kuita maviri manhamba, imwe ye mufananidzo uye imwe yacho kubva piri, semuenzaniso:
MuchiSpanish zvingaite sekutaura "manomwe nemakumi matatu nesere." Iwe zvakare une imwe nzira yekuzvinyora, iyo yakafanana neiya awakaona kare.
Chero nzira inoshanda. Mune yekutanga iwe unonyora iyo nhamba yeiyo yekutanga manhamba uyezve musanganiswa pakati pemaviri manhamba asara. Uye mune yechipiri sarudzo iwe unonyora iyo yakazara nhamba. Teerera kune inotevera mienzaniso:
shanu zana remakore
piri zana remakore
pfumbamwe makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
nhanhatu kana nomwe
kanomwe oh matatu
Tarisa uone mienzaniso mitatu yekutanga, riini gore pakati 1 uye 99, haigone kuora kuita manhamba. Izvo zvakare hazvigone kuitwa kana iri zana ramakore. Pakadaro zvinogamuchirwa kuisa izwi rekuti zana kana zana remakore. Zvino tarisa kune miviri yekupedzisira mienzaniso, ona kuti kune "oh" pane "zero". Iwe unofanirwa kuzviita seizvi pese paunoda kutaura kusvika 0 mumakore. Iyi inotevera mienzaniso imwe nzira zvisizvo kuvanyora:
Kubva 1000 kusvika ku1999
Aya makore, achiumbwa nemana manhamba, zvinokwanisika kuvaparadzanisa kuita zvikamu zvakaenzana uye nyora saizvozvo. Semuyenzaniso:
Pane zvisaririra pano zvakare, ino nguva ine makore anopera mumazero maviri (0) seinotevera:
Iwo manhamba maviri ekutanga akanyorwa sedhinari nhamba kubva pagumi kusvika pagumi nenomwe, uye maziro maviri (10) anomiririrwa neshoko rekuti "zana".
Kubva 2000 zvichienda mberi
Makore mapfumbamwe ekutanga a9 akanyorwa nenzira imwechete yatakatokuratidza mumakadhinari manhamba:
Kubva ipapo zvichienda mberi vanokwanisa kunyorwa vachivaparadzanisa vaviri, sezvatakaita nemakore apfuura, kana kuitwa senhamba chaiyo.
makumi maviri negumi
makumi maviri nemakumi maviri
Madimikira muChirungu chinhu chidiki kana iwe ukaverenga gwara iri nemazvo. MuChirungu, makoma (,) haashandiswe kuratidza nhamba ine madhimoni, asi asi pfungwa (.). Unofanira kugara uchinyora chikamu chose (kana paine chimwe), wozoisa "poindi" uye pakupedzisira nyora imwe neimwe inotevera nhamba imwe neimwe.
Usati watanga nezvikamu iwe unofanirwa kuyeuka kuti iyo nhamba ndiyo yepamusoro pechikamu uye iyo dhinomineta pasi. Iwo manhamba akanyorwa ne Makadhinari nhamba, nepo madhinominesheni aine manhamba.
Kana kumusoro kwechikamu chakakura kudarika 1, pasi chinonyorwa muhuwandu. Uye kana iyo dhinomineta ndeye 2, zvakanyorwa "
»Kana nhamba iri 1, uye«
Kunyora kana kududza zvikamu muChirungu, iwe unongofanirwa kuwedzera izwi rekuti "muzana" kumagumo enhamba. Uri kuenda kunonyora manhamba zvakafanana neakare apfuura.
Kutaura nezve mari muChirungu kunounza zvese zvawakatoona pamwe chete. Kuti uite izvi iwe unofanirwa kunyora iyo yakazara nhamba seyese makadinali nhamba uye wozotaura Mari iyo. Kana paine zvidimbu, pachinzvimbo che "point" unofanira kuisa "uye" uyezve zita rechikamu chemari ichocho.
Mienzaniso yemitsara ine nhamba muChirungu
Ndine vanakomana vaviri
Ndine gumi mune math
Sofia ane mabhuku anodarika makumi maviri nematatu
zana nemakumi mashanu vatambi vakapinda
fekitori inogadzira sipo dzinopfuura mamirioni mashanu
pane mombe makumi manomwe nenhatu papurazi
mota inodhura zviuru gumi zvemazana nemazana mashanu euros
ndaona bhaisikopo kanomwe
iyo zviuru zviviri negumi nemana yenhabvu yenyika mukombe yaive muBrazil
mwanakomana wangu akaberekwa ari gumi nemapfumbamwe makumi mapfumbamwe nemasere
PI yakaenzana nenhatu poindi imwe ina shanu mapfumbamwe ...
yangu smartphone ine iyo sere poindi zero vhezheni yeApple
chetatu chakaenzana nezero nongedzo matatu matatu matatu matatu matatu ...
mhinduro yaive zvikamu zviviri kubva muzvishanu
komisheni iri gumi muzana
mwedzi uno ndakawana mapoinzi matatu makumi maviri neshanu muzana
vane chikwereti kwandiri madhora mashanu
yaiita euro imwe nemasendi makumi manomwe nematanhatu
Nguva muganhu: 0
0 yemibvunzo gumi yakapera
Tevere, isu takagadzirira mashoma ekurovedza muviri kuitira kuti iwe ugone kuyedza ruzivo rwako rwehuwandu muChirungu. Unogona kuongorora zvatave kudzidza muchinyorwa zvacho pasina dambudziko, chakakosha ndechekuti iwe chengeta izvo zvekutanga uye zvakakosha 🙂 Rombo rakanaka!
Iwe waita iyi yemubvunzo. Naizvozvo, haugone kuzvitangazve.
Kuisa irwo remibvunzo ...
Iwe unofanirwa kuve unonyoreswa mushandisi kutora iro remibvunzo.
Unofanirwa kupedzisa mibvunzo inotevera, kutanga bhuku remibvunzo iyi:
Iwe une 0 de 0 zvinogona kuitika (0)
Kwete kupihwa kune chero chikamu 0%
Mubvunzo 1 de 10
Unoperetera sei nhamba shanu muChirungu?
Mubvunzo 2 de 10
Unoperetera sei 142?
Mubvunzo 3 de 10
Zvitatu uye makumi matanhatu zvakaenzana ...
Mubvunzo 4 de 10
Ndinoziva sei Shandura kuChirungu mutongo unotevera: «Baba vangu Vicente vane makore makumi mana nemasere»
Baba vangu Vincent vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa
Shamwari yangu Vincent ane makore makumi mashanu nesere ekuberekwa
Baba vangu Vincent vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa
Mubvunzo 5 de 10
Mubvunzo 6 de 10
Makumi matanhatu nematanhatu pamwe nemakumi maviri zvakaenzana ...
Mubvunzo 7 de 10
Izvi zvakanyorwa sei gumi nemanomwe muchiSpanish?
Mubvunzo 8 de 10
Wakafarira peji ino here?
Mubvunzo 9 de 10
Nhamba ipi inoita makumi matanhatu nenomwe?
Mubvunzo 10 de 10
Zviviri uyezve zvitatu zvakaenzana ...
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Nhamba dzeChirungu kubva 1 kusvika 1000